Admin ကိုစေတန်၏ ဘလော့ဂ်ဖန်တီးခြင်း စာအုပ် အ&#4 - MYSTERY ZILLION
Admin ကိုစေတန်၏ ဘလော့ဂ်ဖန်တီးခြင်း စာအုပ် အ&#4
November 2008 edited August 2009 in Idea
ဇလပ်ပြောချင်တာက ကိုရီးယားမှာ ထုတ်ဝေရောင်းချခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်အကြောင်းပါ...။ မှတ်မှတ်ရရ ဇလပ်လဲ ဝယ်ထားပါတယ်..။ အထောက်အထားဖြစ်အောင်လို့ပါ..။ ဘလော့ဂ်ဖန်တီးဖူးမယ်ဆိုရင် ဘလော့ဂ်နည်းပညာတွေ ပြန့်ပွားအောင် ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ စေတန်ဂေါ့ကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျူးပစ်မန်ဘာတွေကတော့ ဘလော့ဂ်မလုပ်ဖူးတောင် ကြားဖူးနားဝတော့ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်..။ ဘလော့ဂ်နည်းပညာပြန့်ပွားရေးအတွက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မဆို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေနိုင်တယ်လို့ ခွင့်ပြုထားတာပါ...။ ဘယ်ရောက်သွားပြန်ပြီလဲလို့ မထင်ပါနဲ့နော်...။ ဇလပ်ကလေရှည်တတ်တော့ ဖတ်တဲ့သူလဲ စိတ်လေးတော့ ရှည်ပေးပေါ့နော...။ အဲဒီဖြန့်ဝေတဲ့စာအုပ်လေးနံမည်က အင်တာနက်ကြည့်တတ်သူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာဖန်တီးတတ်စေမည့် 'ဘလော့ဂ်ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဆိုင်ဘာအတိုက်အခံသမားများအတွက်လက်စွဲ' ပါတဲ့ဗျား...။ ရေးသားတဲ့သူက အိဂျူးအိုပါးဆိုတဲ့သူပါ...။ ဒီနံမည်နဲ့ ဟန်းဂုရွာမှာ ကိုဝိုင်း(မိုးညှင်း ပို့စ်တွေ တင်ပေးနေပါတယ်...။ ဘယ်သူလဲတော့ ဇလပ်လဲ မသိပါဘူး...။ တစ်ခြား သူ့အသိပဲလား...။ သူ့ရဲ့ကလောင်ခွဲပဲလားတော့ ဇလပ်မသိပါဘူး...။ ပြောချင်တာကတော့ အဲဒီစာအုပ်ထုတ်ဝေတာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဇလပ်စဉ်းစားမိတာလေးပါပဲ...။ စာအုပ်မှာက ပထမပိုင်း၊ ဒုတိယပိုင်းဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်..။ ပထမပိုင်းမှာတော့ စေတန်ဂေါ့ဒ်ရဲ့ ဘလော့ဂ်လုပ်နည်းကို ကူးယူဖော်ပြထားတာပါပဲ...။ ဒုတိယပိုင်းကတော့ နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါများနှင့် ဆိုင်ဘာအတိုက်အခံသမားများအတွက်လက်စွဲကို ဖော်ပြထားတာပါ...။ ဘာပဲပြောပြော ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါပဲ...။ အဲ...ဒါပေမယ့် ဇလပ် ဘဝင်မကျမိတာက ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ဟာကို လွယ်လင့်တကူ ကူးယူရောင်းချတာကိုပါပဲ...။ ကာယကံရှင်တွေကို တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတာမျိုးရှိသလားလို့ လေ့လာကြည့်တော့လဲ မတွေ့မိပါဘူး...။ ဇလပ် မသိတာလဲ ပါရင်ပါနေမှာပေါ့နော..။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားပြီးသားဆိုလဲ စာအုပ်မှာ ခွင့်ပြုချက်ရထားတဲ့အကြောင်းလေးတော့ ရေးထည့်ပေးမှ ဇလပ်တို့လို လူမျိုးတွေ အမြင်ရှင်းမှာပါ...။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ "NOT FOR BUSINESS PURPOSE" လို့ ရေးထားပါတယ်...။ စာအုပ်ရောင်းစျေးကတော့ ကိုရီးယားဝမ် ၇ဝဝဝ ပါ...။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာတော့ အိဂျူးအိုပါး စုစည်းတင်ပြသည်လို့ ရေးထားပြီးတော့ နောက်မျက်နှာဖုံးမှာမှ Saturn God ၏ ဘလော့ဖန်တီးခြင်းစာစောင်နှင့် နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့၏ ဘလော့ဂါများ၊ ဆိုင်ဘာ အတိုက်အခံသမားများအတွက် လက်စွဲစာအုပ်တို့ကို စုစည်းထားသည်လို့ ရေးထားပါတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူများရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သူတို့ဆီက ယူထားတယ်ဆိုတာ မျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုတာ အချင်းချင်းကြားမှာ ပြောစရာမလိုအောင် ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပါ...။ အဲဒါကို အိဂျူးအိုပါးပဲ မသိလေရော့သလား....။ ရှိပါစေတော့....။ နောက်တော့ သိမှာပါပေါ့....။ ဇလပ်လဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်ပါတယ်...။ ပြောမနေတော့ပါဘူးပေါ့...။
ကျွန်တော် အထက်ပါ Post ကို Myanmar Cupid ထဲက ကူးလာတာပါ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Admin ကိုစေတန် သိရအောင်လိုပါ။ ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်မိပါတယ်။ ကိုစေတန့် ဆီက ခွင့်ပြူချက်ယူထားတယ် ဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။
Credit to Myanmar Cupid Forum
နာမည်ကြားကတည်းက အဖိုးမတန်၊သောက်သုံးမကျတဲ့ အချောင်သမားမှန်းသိတာတယ်။ ဘာတဲ့ အီဂျူးအူပါးတဲ့၊ အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းတဲ့ နာမည်။ :14:
မင်းတို့လေးတွေ၊ အချိုးမပြေပုံနဲ့ အကျွနု်ပ် လက်ယဉ် ပုံနှင့်တော့ တွေ့တော့မည်။
အက်ဒမင် ကြီးစေတန် ရေ ဆိုင်ကိစ္စလေး ပြီးရင် ဒီမှာလာရှင်းဦးလေ
အဲဒီလိုမျိုးရကြေးဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆီမှာ အီး ဘွတ် တွေအများကြီးရှိတယ် ထုတ်ပြီးတော့ ရောင်းလိုက်ဦးမယ် ဟွန့်
ဇလပ်ပြောချင်တာက ကိုရီးယားမှာ ထုတ်ဝေရောင်းချခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်အကြောင်းပါ...။ဇလပ်လဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်ပါတယ်...။ ပြောမနေတော့ပါဘူးပေါ့...။
ခံစားချက် နှင့် တင်ပြချက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကျွန်တော် သူတို့ကိုသိလည်း မသိပါဘူး။ နောက်ပြီး ခွင့်ပြုချက်လည်း လာတောင်းဘူးမယ်မထင်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်ဆီကို ခွင့်ပြုချက်ဆိုလို့ ဟိုးအရင်တုန်းက တစ်ယောက်လာတောင်းဖူးတယ်။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေဖို့ဆိုပြီး။ ရောင်းစားဖို့မဟုတ်ရင် ကျွန်တော် ခွင့်ပြုတယ်။ ရောင်းစားတာကိုတော့ ခွင့်မပြုဘူး။ ကျွန်တော့်စာအုပ်တွေကို ဘယ်သူတစ်ယောက်မှ ရောင်းစားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ရောင်းစားခွင့်လည်း မပေးထားပါဘူး။ အီဂျူးအူပါး ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ဆိုတာ ဘယ်သူမှန်းလည်းမသိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ ကိစ္စကို လုံးဝ ကန့်ကွက်တယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စာအုပ်ကို အဲလိုရောင်းစားခွင့်မပြုပါဘူး။ print ထုတ်ချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် print ထုတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို မိတ္ထူ ဆွဲခွင့်တော့ရှိတယ်။ ငွေကြေးတန်ဖိုး ဖြတ်ကာလုံးဝ ရောင်းစားခွင့်မပြုပါ။
...။ ဇလပ်ကလေရှည်တတ်တော့ ဖတ်တဲ့သူလဲ စိတ်လေးတော့ ရှည်ပေးပေါ့နော...။ အဲဒီဖြန့်ဝေတဲ့စာအုပ်လေးနံမည်က အင်တာနက်ကြည့်တတ်သူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာဖန်တီးတတ်စေမည့် 'ဘလော့ဂ်ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဆိုင်ဘာအတိုက်အခံသမားများအတွက်လက်စွဲ' ပါတဲ့ဗျား...။ ရေးသားတဲ့သူက အိဂျူးအိုပါးဆိုတဲ့သူပါ...။ ဒီနံမည်နဲ့ ဟန်းဂုရွာမှာ ကိုဝိုင်း(မိုးညှင်း ပို့စ်တွေ တင်ပေးနေပါတယ်...။ ဘယ်သူလဲတော့ ဇလပ်လဲ မသိပါဘူး...။ တစ်ခြား သူ့အသိပဲလား...။ သူ့ရဲ့ကလောင်ခွဲပဲလားတော့ ဇလပ်မသိပါဘူး...။ ပြောချင်တာကတော့ အဲဒီစာအုပ်ထုတ်ဝေတာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဇလပ်စဉ်းစားမိတာလေးပါပဲ...။ စာအုပ်မှာက ပထမပိုင်း၊ ဒုတိယပိုင်းဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်..။ ပထမပိုင်းမှာတော့ စေတန်ဂေါ့ဒ်ရဲ့ ဘလော့ဂ်လုပ်နည်းကို ကူးယူဖော်ပြထားတာပါပဲ...။ ဒုတိယပိုင်းကတော့ နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါများနှင့် ဆိုင်ဘာအတိုက်အခံသမားများအတွက်လက်စွဲကို ဖော်ပြထားတာပါ...။ ဘာပဲပြောပြော ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါပဲ...။ အဲ...ဒါပေမယ့် ဇလပ် ဘဝင်မကျမိတာက ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ဟာကို လွယ်လင့်တကူ ကူးယူရောင်းချတာကိုပါပဲ...။ ကာယကံရှင်တွေကို တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတာမျိုးရှိသလားလို့ လေ့လာကြည့်တော့လဲ မတွေ့မိပါဘူး...။ ဇလပ် မသိတာလဲ ပါရင်ပါနေမှာပေါ့နော..။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားပြီးသားဆိုလဲ စာအုပ်မှာ ခွင့်ပြုချက်ရထားတဲ့အကြောင်းလေးတော့ ရေးထည့်ပေးမှ ဇလပ်တို့လို လူမျိုးတွေ အမြင်ရှင်းမှာပါ...။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ "not for business purpose" လို့ ရေးထားပါတယ်...။ စာအုပ်ရောင်းစျေးကတော့ ကိုရီးယားဝမ် ၇ဝဝဝ ပါ...။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာတော့ အိဂျူးအိုပါး စုစည်းတင်ပြသည်လို့ ရေးထားပြီးတော့ နောက်မျက်နှာဖုံးမှာမှ saturn god ၏ ဘလော့ဖန်တီးခြင်းစာစောင်နှင့် နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့၏ ဘလော့ဂါများ၊ ဆိုင်ဘာ အတိုက်အခံသမားများအတွက် လက်စွဲစာအုပ်တို့ကို စုစည်းထားသည်လို့ ရေးထားပါတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူများရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သူတို့ဆီက ယူထားတယ်ဆိုတာ မျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုတာ အချင်းချင်းကြားမှာ ပြောစရာမလိုအောင် ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပါ...။ အဲဒါကို အိဂျူးအိုပါးပဲ မသိလေရော့သလား....။ ရှိ
သူ လည် ဘန်း ကျော် သားပြီသပေတယ်။ မလုပ် သင့် ပါ ဘူး:14:။ သူများစေသနာ နဲရေးတဲ့ဟာကို အခယုူ ရောင်းတာကတော့ ။
ကိုစေတန် ဒီတိုင်း ဒီမှာ ပြောနေရုံနဲ့တော့ ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်ဘူး ... ။ Myanmar Cupid က ဒီ Post တင်ထားတဲ့ member ဆီမှာ စုံစမ်းကြည့်ပါလား။ မြှောက်ပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒီတိုင်း မနေသင့် ဘူးလို့တော့ ထင်တာပဲ... စေတနာဆော်ကားတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်တယ် :14::14:
ဆိုင်ဘာအတိုက်အခံသမားများအတွက်လက်စွဲ' ပါတဲ့ဗျား...။ ရေးသားတဲ့သူက အိဂျူးအိုပါးဆိုတဲ့သူပါ...။
နာမည်ကြားရုံနဲ့တင် နာရင်းကို ၁၀ ချက်လောက်ရိုက်ချင်စရာ
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စာအုပ်ကို အဲလိုရောင်းစားခွင့်မပြုပါဘူး။ print ထုတ်ချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် print ထုတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို မိတ္ထူ ဆွဲခွင့်တော့ရှိတယ်။ ငွေကြေးတန်ဖိုး ဖြတ်ကာလုံးဝ ရောင်းစားခွင့်မပြုပါ။
မှန်တယ် bro . ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး..:14:
ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ မရှိလို့ ဖြစ်ရမယ်..:)).:)).:)).
အနော်လဲ profile signature အနည်းငယ်ပြောင်း၍ ကူးထားမိပါသည် ချင့် ကိုဆေတန်ခွင့်ပြုပါသလားခင်ညာ :d:d:d:d:d:d
အွန်.. ကောင်းလိုက်တဲ့စာသား.. ကျွန်တော့်စာသားထက်တောင် ကောင်းသေး.. :d
တော်တော်ကောင်းတဲ့စာသားပဲ အိုင်ဒီယာမိုက်တယ်ဗျာ... ခိုက်တယ်... :d
ကိုစေတန်..ကိုယ်စာအုပ်ကိုယ် မှတ်ပုံမတင်ထားဖူးလားဂျာ။ ။
ခက်တာက ကျွန်တော်တို ့ဆီမှာ အင်တာနက်နဲ ့ပတ်သတ်တဲ့ဥပဒေဆိုတာ က
သေသေချာချာ ရေရေရာရာမရှိတာခက်တယ်။ ။
ဒီလိုမျိုးတွေ က ဆက်ဖြစ်နေအုံးမှာပါပဲ။
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မထိမ်းနိုင်ရင်တော ့။ ။
အဲ့ဒါကြီးကတော့ မရှက်တတ်လွန်းရာ ကျပါတယ်ဗျာ။တော်တော်မျက်နှာပြောင်ကြတယ်ဗျာ!!
ဒီလို လုပ်လို့ရတယ်ဆို ကျွန်တော့်မှာ လည်း ကိုစေတန်ရေးတဲ့ ebook တွေအများကြီးပဲ
Microsoft Office Word Document (.docx)
တွေရှိတယ်။ရောင်းပြီး macbook pro ဝယ်ပစ်လိုက်မယ် :D:D
သူများ ကြိုးစားမှု နဲ့ငွေလိုချင်တဲ့လူ။ တော်တော် ဆိုးတယ်ဗျာ။ သူတစ်ပါး ပစ္စည်း ခွင့်ြ့ပုချက်မရပဲ ယူသုံးတာ ခိုးမှု မြောက်တာ ဒီလူမသိတာ တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။